LA OGAADAY: Waqtiga Horyaalka Premier League Dib Loo Bilaabayo, Xilliga Liverpool Koobka La Guddoonsiinayo, Saamaynta Uu Ku Yeelanayo Xili-ciyaareedka Dambe Iyo Fasax La'aanta Ku Dhacaysa Ciyaartoyda - Gool24.Net
LA OGAADAY: Waqtiga Horyaalka Premier League Dib Loo Bilaabayo, Xilliga Liverpool Koobka La Guddoonsiinayo, Saamaynta Uu Ku Yeelanayo Xili-ciyaareedka Dambe Iyo Fasax La’aanta Ku Dhacaysa Ciyaartoyda
Horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League oo la qorsheeyey in bisha April 30 dib loo bilaabo ayaa waqti kale oo dheeraad ah hakad kusii jiri doona, maadaama caabuqa Coronavirus oo ku faafayo waddanka Ingiriiska oo dhimashooyin badan uu geysanayo.
Xili ciyaareedka 2019/20 oo la joojiyey horraantii bishan March, waxa qorshuhu ahaa in la bilaabo April 4, laakiin waxa maamulka Premier League ay sii dheereeyeen waqtiga fasaxa laga ahaanayo garoomada, waxaanay iclaamiyeen in horraanta bisha May dib loogu soo laaban doono.
Sida uu qoray wargeyska Telegraph, mar kale ayuu isbeddel ku dhici doonaa waqtigaas, waxaana fasaxa lagu kordhin doonaa bil kale, taas oo ka dhigi doonta muddada uu hakadka ku jiro saddex bilood oo xidhiidh ah.
Wargeysku waxa uu soo bandhigay qorsheyaal miiska saaran oo aan wali bannaanka usoo bixin, kuwaas oo saamayn ku yeelan doona bilowga xili ciyaareedka dambe iyo fasixii ay ciyaartoydu geli jireen.
Qorshahan oo la shaacin doono bisha April, waxa uu wargeysku sheegay in horyaalka loo muddeeyey inuu bilaabmo June 1, isla markaana ciyaaraha oo dhan lagu dheelo garoomo madhan oo ay albaabadu u xidhan yihiin, isla markaana aan wax fasax ah la gelinin laacibiinta oo ay kulamo sanka isku haya ciyaaraan.
Lix toddobaad oo kaliya ayaa dhamaan kulamada hadhsan oo ah 9 illaa 10 kulan lagu ciyaari doonaa, iyadoo badhtamaha bisha July, xilligaas oo ku beegan waqtigii ay ciyaartoydu kasoo laaban jireen fasaxyada xagaaga ee ay safarrada Maraykanka iyo kulamada saaxiibtinimo ee u diyaar-garowga xili ciyaareedka dambe bilaabi jireen.
Isla marka uu xili ciyaareedku dhamaado, dhamaan kooxuhu waxay bilaabi doonaan u diyaar-garowga xili ciyaareedka 2020/21 iyagoon wax fasax ah gelin.
Qorshahan waxa uu wargeysku sheegay inay ku qanceen telefishannada xuquuqda baahinta ciyaaraha haysta sida Sky Sports iyo BT Sport.
Wargeysku ma sheegin waxa laga yeelayo kulamada maxalliga ah ee kale ee tartanka FA Cup oo wareegga 8da ay kooxuhu isugu soo baxeen, balse hadal-haynta ugu weyn waxay noqonaysaa tartamada Yurub sida Champions League iyo Europa League oo loo muddeeyey in finalkooda la ciyaaro badhtamaha bisha June.
Liverpool oo xili ciyaareedkan ku guuleysanaysa horyaalka Premier League oo laba kulan oo kali ahi uga hadhsan yihiin ayaa gudaha bisha June la guddoonsiin doonaa koobka, iyadoo ay saf sharafeed u geli doonaan ciyaartoyda Manchester City haddii ay badiso labada ciyaarood ee kasoo horreeya ee Everton iyo Crystal Palace.